Skinny Fabulous to unleash the power of soca on Rum and Rhythm | Culture
Location: Mbido » Ịdee » omenala » Skinny Fabulous iji kpughee ike nke soca na Rum na Rhythm
Skinny Fabulous iji kpughee ike nke soca na Rum na Rhythm
Ndị na-eduga nri Caribbean na ihe omume rum na New York ga-ama jijiji n'okpuru ike nke Skinny Fabulous, onye ndu Vincentian soca artiste na Trinidad carnival 2019 ụzọ ngagharị mmeri, n'oge Caribbean Week New York (CWNY2019).
'Skinny' nke ezigbo aha ya bụ Gamal Doyle, ga-egosipụta ike ya na-efe efe ma na-emetụta nka arụmọrụ na Rum & Rhythm, The Ultimate Caribbean Food and Rum Experience, na Capitale (130 Bowery na Manhattan) na Fraịde, 7 June 2019 site na 6:30 pm - 11 pm Ọ bụ otu ntụgharị a, ikike dị ịtụnanya na ikike ịmepụta alụmdi na nwunye zuru oke n'etiti soca na ịgba egwu nke dugara ya ịmepụta akụkọ ihe mere eme site na ịbụ onye mbụ na-abụghị Trinidadian iji merie aha njem n'okporo ụzọ na mba ejima-agwaetiti.
"Skinny Fabulous bụ onye soca artiste mba ụwa na mpaghara toro eto, onye dere, mepụta ma rụọ ọtụtụ hits gụnyere 2019 Trinidad carnival road march hit, Famalay," Glen Beache, onye isi ndị isi nke St. Vincent na Grenadines Tourism Authority kwuru. . “Inwe ya ka ọ nọchite anya St. Vincent na Grenadines na Rum & Rhythm, ga-eme ka ikike nke ikike njem nleta na-adọtawanyewanye ebe anyị na-aga. Ọnụnọ nke Skinny dịka onye nnọchi anya ọdịnala nke gọọmentị ga-emekwa ka a mata isi ihe mejupụtara ọdịbendị anyị, ya bụ, emume mmemme mbụ anyị bụ “Vincy Mas,” nke a na-eme kwa afọ, na-ejedebe izu abụọ nke mkpori ndụ na mkparịta ụka na-amalite na Fraịdee ikpeazụ na June.
Skinny Fabulous sonyeere ndị Titanad titan Machel Montano na Bunji Garlin maka egwu a na-ewu ewu "Famalay," nke Dominica's Krishna 'Dada' Lawrence mepụtara. Egwu a na-efe efe na nkebi ahịrịokwu ya na-adọrọ adọrọ na-adọwa ikuku ikuku na mpaghara na mba ụwa. Ọ bụ egwu soca nke izizi sụrụ Nọmba 1 na iTunes Reggae Charts.
Na mgbakwunye na ọtụtụ otuto ya dị ka onye na-agụ egwú, onye omenkà nwere nkà abanyela n'ịrụ ọrụ ebere. O guzobere akwukwo akwukwo maka umu akwukwo isii ma mezie ihe omuma nke ulo akwukwo nke choro ndi na-eto eto bu ndi isi na ulo akwukwo. O mebela akwụkwọ akụkọ Dazzle, nke na-ekpughere ndị ọkachamara na-eto eto, ndị ọchụnta ego yana azụmahịa dị iche iche.
"A na-asọpụrụ CTO ịnwe Skinny Fabulous iji gosipụta ezigbo, ụdị mgbagwoju anya ma na-agbakwunye nke Caribbean na Rum & Rhythm," ka Sylma Brown, onye nduzi CTO-USA kwuru. "Egwu Skinny Fabulous 'na-akpali ndị na-ege ntị na Caribbean niile, ma ugbu a, n'ime izu Caribbean, na mmụọ nke ememme ndị Caribbean, ọrụaka ya ga-akpali ndị njem na mpaghara anyị."
Ọ bụ ezie na Rum & Rhythm na-anọchi anya ọmarịcha ahụmịhe ọdịbendị Caribbean na nke gastronomic nke a maara nke ọma na mpaghara ahụ, ihe omume a bụkwa nnukwu ego maka CTO Scholarship Foundation, otu ọrụ ebere nke na-enye ndị ọkà mmụta mba Caribbean ohere ịchụso ọmụmụ na njem nleta na ndị metụtara njem, bụ ndị, na-enweghị enyemaka a, enweghị ike ịchụso nrọ ha maka ọrụ na ụlọ ọrụ ndị njem.
Caribbean Grenadine Reggae Tourism Trinidad
Airbus na-agba nnyefe nke ụgbọ elu 12,000th ya
Ethiopian Airlines na-eji ngwa mkpanaka emelitere eme njem ka ọ dị mfe
Hawaii, South Pacific, Europe na Caribbean bụ ...